Cheap OEM mpempe akwụkwọ metal ekwe akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Mpempe akwụkwọ metal dị iche iche gụnyere ikwe, nhazi nke ịgbanwe akuku mpempe akwụkwọ ma ọ bụ efere. Dị ka ekwe efere n'ime a V udi, U udi, wdg, Mpempe akwụkwọ metal akụkụ bụ ngwaahịa esichara site mpempe akwụkwọ technology. Anyị enweghị ike ime na-ejighị akụkụ igwe rụọ ebe niile na ndụ anyị. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ sitere na ike filament winding, ịchacha laser, nhazi ọrụ, ntinye njikọ, eserese ígwè, ịkpụ plasma, nkenke ịgbado ọkụ, mpịakọta, mpempe akwụkwọ na-ehicha, ịnwụ anwụ, ịkpụcha mmiri, nkenke ịgbado ọkụ.
OEM mpempe akwụkwọ metal ekwe akụkụ-nkenke mpempe akwụkwọ metal ekwe nhazi ígwè akụkụ
Mpempe akwụkwọ metal a kọwara dị ka: mpempe akwụkwọ metal bụ a keukwu oyi na-arụ ọrụ usoro maka metal Ibé akwụkwọ (na-emekarị n'okpuru 6mm), gụnyere akpacha ajị, punching / ịcha / njọ, mpịachi, ịgbado ọkụ, riveting, splicing, na-akpụ (dị ka ụgbọ ala ahu). Akụkụ ya pụtara ìhè bụ ọkpụrụkpụ edo nke otu akụkụ ahụ. Mpempe akwụkwọ metal ngwaahịa nwere àgwà nke ìhè arọ, elu ike, eletriki conductivity, ala na-eri, na ezi uka mmepụta arụmọrụ. Ha nwere otutu uzo eji eme ihe. Mpempe akwụkwọ metal nhazi e ọtụtụ-eji na ubi nke electronic, nkwukọrịta, akpakanamde ụlọ ọrụ, na ọgwụ na ahụ ike na ngwá. Dịka ọmụmaatụ, na kọmputa, ekwentị mkpanaaka, na MP3, mpempe akwụkwọ bụ akụkụ dị oke mkpa. Na mgbakwunye, a na-eji ya n'ichepụta ngwa ọgwụ, a na-ejikwa ya n'ụgbọ ala na gwongworo (gwongworo), ụgbọ elu ụgbọ elu na nku, tebụl ọgwụ, ụlọ ụlọ (ihe owuwu) na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ.
Uru nke Shanghai Ouzhan mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-ehicha akụkụ akpaaka
- Mbelata ike
- Ewepụghị elu
- Ghọta ọtụtụ ọrụ dịka nsị, ịchacha, ịchacha, ịsa, wdg
- Maka akụkụ na-adịghị agbanwe agbanwe, nkuku kpuru ìsì, oghere, wdg, dịka oghere na tubes, nwere ike ịmecha
- Oge a haziri ahazi, ọsọ ọsọ ọsọ, ọrụ dị mfe ma dịkwa mma
- Agbanwe mgbanwe ugboro ugboro iji gboo mkpa polishing dị iche iche
Omenala mpempe akwụkwọ igwe ekwe igwe akụkụ
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Osote: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ laser ọnwụ